बुटवल कोरोना अस्पतालका आइसियू र भेन्टिलेटर ‘प्याक’ भए - Lekhapadhi मुख्य समाचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी १० बैशाख २०७८, शुक्रबार २१:४२ मा प्रकाशित
अस्पतालका फोकलपर्सन डा. सुदर्शन थापाका अनुसार पछिल्ला दिनमा जटिल अवस्थाका बिरामीको संख्या बढिरहेको छ । बुधबार पिसिआर टेस्ट गरिएकामध्ये ५० प्रतिशतको रिपोर्ट पजिटिभ आएको छ । जिल्लाभर बिहीबार मात्रै एक सय २५ जनामा संक्रमण देखिएको छ । विशेष अस्पतालमा ३६ वटा आइसोलेसन बेड छन् । १४ चिकित्सक र ७० नर्स उपचारमा खटिएका छन् ।
प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालले गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई प्राथमिकतामा राखेर उपचार भइरहेको बताए । ‘तर, बेड प्याक भएकाले अब गम्भीर खालका बिरामीसमेत भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन । सबैलाई भर्ना गरेर उपचार गर्ने अवस्था नै छैन । अहिलेकै दरमा संक्रमित बढे एक सातापछि थप जटिलता आउने स्थिति छ,’ उनले भने । प्रादेशिक अस्पतालमा छुट्टै सञ्चालन गरिएको फिबर क्लिनिकमा सात आइसोलेसन बेड छन् ।
प्रदेशका अन्य अस्पतालको पनि यस्तै अवस्था छ । भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा नयाँ संक्रमितलाई भर्ना गर्न बेड नभएको मेडिकल सुपरिटेन्डेट डा. शकुन्तला गुप्ताले बताइन् । सबै बेड भरिएकाले बिरामीलाई फर्काउनुपरेको उनको भनाइ छ ।
-नयाँ पत्रिकामा प्रकासित सामग्री